AnyTrans | मा तपाइँको आईफोन धन्यवाद को जगेडा प्रतिलिपि बनाउनुहोस् आईफोन समाचार
कुनै पनि ट्रान्सको साथ तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्
ईडर एस्टेबान | | आईफोन अनुप्रयोगहरू
हामीसँग आईफोनमा भएका सबै चीजहरूको ब्याकअप प्रतिलिपिहरू बनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी कुनै पनि समयमा जानकारी हराउन चाहँदैनौं। भाग्यवस, यस सम्बन्धमा धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्। एक उपकरण जुन हामी यस केसमा प्रयोग गर्न सक्छौं AnyTrans हो, जुन सम्भवतः तपाई धेरैलाई परिचित देखिन्छ। यो फाईल म्यानेजमेन्टको लागि अनुप्रयोग हो, जसले अब हामीसँग आईफोनमा भएका सबै सामग्रीको ब्याकअप प्रतिलिपिहरू बनाउन अनुमति दिन्छ।
कुनै पनि Transrans निरन्तर अपडेट रहन्छ। वास्तवमा, तिनीहरूले भर्खरै नयाँ सुविधाहरूको साथ अनुप्रयोग अपडेट गरे। उनीहरूलाई धन्यवाद, यस अनुप्रयोगले हामीलाई प्रदान गर्ने संभावनाहरू विस्तारित छ। अब नयाँ बैकअप प्रबन्धक प्रकार्य प्रस्तुत गरिएको छजसले निश्चित रूपमा धेरैलाई जित्दछ।
1 एनिट्रान्समा नयाँ ब्याकअप प्रबन्धक
2 AnyTrans डाउनलोड गर्न को लागी
एनिट्रान्समा नयाँ ब्याकअप प्रबन्धक
एनिट्रान्समा ब्याकअप प्रबन्धकले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने वाचा गर्दछ अनुप्रयोगमा। यस भित्र, हामी तीन फरक फरक ब्याकअप विकल्पहरू फेला पार्दछौं, जुन प्रत्येक प्रयोगकर्ताको अवस्था अनुकूल छ। प्रत्येकको आवश्यकतामा निर्भर गर्दै, आईफोनमा अनुप्रयोग प्रयोग गरेर फरक ब्याकअप गर्न सकिन्छ। अनुप्रयोगमा यो नयाँ सुविधा सहित के विकल्पहरू छन्?
पूर्ण जगेडा: यस अवस्थामा आईफोनमा पूरा जगेडा गरिन्छ। यसको मतलव यो छ कि यसमा भएका सबै फाईलहरू र डेटा प्रतिलिपि हुने छन, बाटोमा हराएको कुनै पनि जानकारी छ भनेर बेवास्ता गर्दै।
वृद्धिशील ब्याकअप: यो एक ब्याकअप हो जसले धेरै भण्डारण ठाउँ बचत गर्दछ। थप रूपमा, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि समयमा कुनै निश्चित फाईल पुन: प्राप्ति गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ, उदाहरणका लागि गल्तिले केही मेटाइएको छ भने।
एयर बैकअप: यो एक ब्याकअप हो जुन स्वचालित र वायरलेस भई गरिन्छ। थप रूपमा, यो केहि चीज हो जुन अग्रिम तालिकाबद्ध गरिएको हुन्छ, ताकि ब्याकअप एक निश्चित मिति र समयमा गरिन्छ। यदि तिनीहरू चाहान्छन् भने निश्चित आवृत्तिको साथ प्रोग्राम गर्न सकिन्छ।
त्यसकारण यो देख्न सकिन्छ कि प्रत्येक विकल्पहरू राम्रोसँग समायोजित हुन्छ जुन प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई निश्चित समयमा आवश्यक पर्ने हुन सक्छ। ती सबै अब उपलब्ध छन् कि AnyTrans ब्याकअप प्रबन्धकको यो नयाँ प्रकार्य प्रस्तुत गरेको छ, जसले निस्सन्देह अनुप्रयोगलाई अधिक पूर्ण बनाउँछ।
AnyTrans डाउनलोड गर्न को लागी
ब्याकअपको लागि AnyTrans प्रयोग गर्न सक्षम हुनमा रुचि छ? यो एक कार्यक्रम हो कि हामी हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्छौं, दुबै म्याक र विन्डोजमा। यस कार्यक्रमलाई धन्यवाद छ हामीसंग उपरोक्त ब्याकअप प्रतिलिपिहरूको अतिरिक्त रमाईलो कार्यहरूको श्रृंखला छ। किनकि हामी आईफोनमा भएका सबै प्रकारका फाईलहरू ब्यवस्थापन गर्न सक्दछौं र तिनीहरूको सँधै स्थानान्तरण सजिलैसँग गर्न सक्दछौं। त्यसोभए यो एक प्रोग्राम हो जुन हामीले धेरै प्राप्त गर्न सक्दछौं। तपाईंसँग यसको कार्यहरूको बारेमा अधिक जानकारी हुन सक्छ यो लिंकमा
जैसा कि तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यस प्रकारको प्रोग्राम निःशुल्क छैन (तर तपाईं यसलाई पूर्ण निःशुल्क प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ)। AnyTrans एक चर लागत छ, तपाईले चाहानु भएको लाइसेन्सको प्रकारमा निर्भर गर्दै। यो व्यक्तिगत, परिवार वा व्यापार इजाजतपत्र बीच छनौट गर्न सम्भव छ। जे होस् यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, यो कार्यक्रम नि: शुल्क प्रयास गर्न को लागी सम्भव छ, यो जाँच गर्न सक्षम हुन को लागी केहि यस्तो चीज छ जुन तपाईलाई चाहिएको भन्दा यथार्थमा मिल्छ। यो केहि चीज हो जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि रूचि हुन सक्छ।
यदि तपाईं AnyTrans डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो धेरै सरल छ। तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ यो लिंक प्रविष्ट गर्नुहोस्, जसले हामीलाई कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा लैजान्छ। यो देखाउँदछ लाइसेन्स विकल्पहरू उपलब्ध छन्। यस तरीकाले, प्रत्येक प्रयोगकर्ताले विकल्प छनौट गर्न सक्नेछन जुन उत्तममा उपयुक्त छ कि उनीहरूले त्यो अवस्थामा के खोजिरहेका छन् र प्रोग्राम प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ जुनसँग उनीहरूको आईफोनका यी ब्याकअप प्रतिलिपिहरू उत्तम तरिकामा गर्न सक्दछन्। तपाइँ यस कार्यक्रमको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » कुनै पनि ट्रान्सको साथ तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्
हामाबाट यी USB-C चार्जरहरूको साथ द्रुत चार्जिंगको फाइदा लिनुहोस्